Inona no atao amin'ny Forex - Niparitaka ny varotra tamin'ny Forex Trading
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Inona no miparitaka amin'ny Forex Trading?
Ny fanaparitahana dia iray amin'ireo teny mahazatra indrindra amin'ny tontolon'ny varotra Forex. Ny famaritana ilay hevitra dia tsotra kely. Manana vidiny roa amin'ny mpivady vola isika. Ny iray amin'izy ireo dia vidin'ny Vidiny ary ny iray dia vidiny Ask. Ny fanaparitahana dia ny fahasamihafan'ny Bid (vidiny mivarotra) sy ny Ask (vidio vidiny).
Miaraka amin'ny fomba fijerin'ny mpandraharaha dia mila mitady vola manoloana ny serivisy ireo brokers.
Mahazo vola amin'ny alàlan'ny mpivarotra vola vola amin'ny mpivarotra mihoatra ny vola andoavana ny vola vidiny ireo mpividy.
Mahazo vola koa ireo mpivarotra amin'ny fividianana vola amin'ny mpivarotra latsaky ny vola andoavany mivarotra izany.
Io fahasamihafana io no antsoina hoe fanaparitahana.
Inona no dikan'ny hoe miparitaka?
Ny fiparitaka dia refesina amin'ny lafiny pips izay singa kely vidin'ny hetsika mpivady vola. Mitovitovy amin'ny 0.0001 (teboka fahefatra amin'ny vidin'ny vidiny). Marina izany ho an'ny ankamaroan'ny mpifankatia lehibe raha toa kosa ny joro Yen Japoney dia manana teboka laharana faharoa satria ny pip (0.01).
Rehefa malalaka ny fiparitahana, midika izany fa avo ny fahasamihafana misy eo amin'ny "Bid" sy "Ask". Noho izany, ho avo ny volatility ary ho ambany ny liquidity. Etsy ankilany, ny fielezana ambany dia midika hoe miovaova ambany sy mahery vaika avo. Araka izany, ho kely ny vidin'ny fanaparitahana rehefa mivarotra ny mpivarotra a vola mpivady miaraka amina fielezana mafy.
Ny ankamaroan'ny mpivady vola dia tsy misy vaomiera amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Ny fanaparitahana dia ny vidin'ny mpivarotra irery ihany. Ny ankamaroan'ny mpivarotra forex dia tsy mandoa vaomiera; noho izany dia mahazo tombony amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fiparitahana izany. Ny haben'ny fiparitaka dia miankina amin'ny antony maro toy ny firongatry ny tsena, ny karazana broker, ny mpivady vola, sns.
Inona no iankinan'ny fiparitahana?
Ny tondro miparitaka matetika dia aseho amin'ny endrika curve eo amin'ny tabilao izay mampiseho ny fielezan'ny fihenan'ny vidin'ny "Ask" sy ny "Bid". Afaka manampy ireo mpivarotra sary an-tsaina ny fiparitahan'ny mpivarotra vola miampy ny fotoana. Ny tsiroaroa be mpitia indrindra dia manana fiparitahana kely raha toa kosa ny mpivady exotic dia miely be.
Amin'ny teny tsotra, ny fiparitahana dia miankina amin'ny fahatsapana ny tsena amin'ny fitaovana ara-bola omena, izany hoe, ny avo kokoa ny fihodinan'ny mpivady vola manokana, kely kokoa ny fiparitahana. Ohatra, ny mpivady EUR / USD no mpivarotra betsaka indrindra; noho izany, ny fiparitahana ao amin'ny mpivady EUR / USD no ambany indrindra amin'ireo mpifaninana hafa rehetra. Avy eo, misy koa paresisa lehibe hafa toy ny USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, sns. Raha toa ka misy mpifaninana miavaka dia mitombo imbetsaka ny fiparitahana raha oharina amin'ireo mpifaninana lehibe ary izany dia rehetra noho ny hakiviana manify amin'ny kiraro exotic.
Ireo fanelingelenana maharitra fotoana fohy amin'ny alikaola dia hita taratra amin'ny fiparitahana. Izy io dia manondro toe-javatra tahaka ny famoahana angon-drakitra macroeconomic, ny ora izay mihidy ny fifanakalozana lehibe eto amin'izao tontolo izao, na mandritra ny fialantsasatra amin'ny banky lehibe. Ny maha-solika ny fitaovana dia ahafahana mamaritra raha mety ho kely na kely ny fiparitaka.
- Vaovao ara-toekarena
Ny fihenam-bidy eo amin'ny tsena dia mety hisy fiantraikany amin'ny fihanaky ny forex. Ohatra, ny mpivady sandam-bola dia mety hisedra hetsika mihetsiketsika amin'ny famoahana ireo vaovao ara-toekarena lehibe. Araka izany, ny fiparitahana dia voakasik'izany koa.
Raha te hisoroka toe-javatra iray ianao raha miparitaka be dia be ny mason-tsoratry ny forex news. Hanampy anao hitoetra tsy ho ela ary hiatrika ireo fiparitahana. Toy ny, ny angon-draharahan'ny karama ivelan'ny toeram-piompiana any Etazonia dia mitondra fahavoazana lehibe eo an-tsena. Noho izany, ny mpivarotra dia afaka mijanona ho tsy mitanila amin'io fotoana io mba hanalefahana ny risika. Na izany aza, sarotra ny fitantanana na data tsy ampoizina.
- Volan'ny varotra
Matetika ny sandam-bola misy volan'ny varotra ambany miely toy ny tsiroaroa USD. Ireo mpivady ireo dia manana vola mitentina be nefa mety mbola hihitatra ihany koa ireo mpivady ireo ao anatin'ny vaovao ara-toekarena.
Ny hiparitaka dia mety hijanona ho ambany mandritra ny fotoam-pivarotana lehibe toa an'i Sydney, New York ary London, indrindra fa rehefa miangona ny London sy New York na rehefa tapitra ny fivoriana any London. Ny sela koa dia tratry ny fangatahana amin'ny ankapobeny sy ny famatsiana vola. Ny fangatahana vola be dia hiteraka hiparitaka tery.
- Ny maha-zava-dehibe ny maodelin'ny broker
Ny fiparitaka koa dia miankina amin'ny maodelin'ny raharaham-barotra amin'ny broker.
Ny mpanamboatra tsena amin'ny ankapobeny dia manome miparitaka hatrany.
ao amin'ny Modely STP, mety miovaova na miely hatrany.
In Modely ECN, ny tsena ihany no naelinay.
Ireo modely ireo brokers rehetra dia manana ny tombony sy ny fiononany.
Inona avy ireo karazana fanaparitahana dia hita ao amin'ny Forex?
Ny fiparitahana dia azo raikitra na miova. Toy ny, ny ankabeazan'ny indeks dia nanaparitaka ny ankamaroany. Ny fiparitahan'ny mpivady Forex dia miovaova. Ka rehefa miova ny tolotra sy mangataka vidiny, dia miova ihany koa ny fiparitahana.
1. Fielezana raikitra
Ny fiparitaka dia napetraky ny brokers ary tsy miova izy ireo na inona na inona fepetra ara-tsena. Ny risika ateraky ny fahatapahan-drano dia eo amin'ny ilan'ny broker. Na izany aza, ny brokers dia mihazona ny fielezan'ny karazany amin'ity karazana ity.
Ny mpanamboatra tsena na mpivarotra birao dia manome fiparitahana hatrany. Mividy toerana be dia be avy amin'ny mpamatsy solika ny mpivarotra toy izany ary avy eo manolotra ireo toerana ireo amin'ny ampahany kely amin'ny mpivarotra varotra. Ny brokers dia tena mihetsika amin'ny volan'ny mpanjifany. Noho ny fanampian'ny birao fifampiresahana, ireo brokers forex dia afaka manamboatra ny fiparitahany satria azony atao ny mifehy ny vidiny aseho amin'ny mpanjifany.
Raha ny vidiny dia avy amin'ny loharano tokana, dia toy izany, ny mpivarotra dia matetika miatrika olana amin'ny fangatahana. Misy fotoana sasany miova haingana ny vidin'ny mpivady vola na dia eo aza ny fihenam-bidy. Koa satria miova ny fiparitahana dia tsy afaka manitatra ny fiparitahana ny mpivarotra ahafana manitsy ny toetry ny tsena ankehitriny. Noho izany, raha manandrana mividy na mivarotra amin'ny vidiny manokana ianao dia tsy hamela ilay mpitsara hametraka ilay lamina fa aleo ilay mpivarotra dia hangataka anao hanaiky ny sarany takiana.
Ny hafatry ny fangatahana dia haseho eo amin'ny làlan'ny varotra varotra anao hampahafantatra anao fa nifindra ny vidiny ary raha manaiky ny vidiny vaovao ianao na tsia. Vidy ratsy kokoa noho ny vidin'ny baikoina ny ankamaroany.
Rehefa haingana be ny vidiny, dia mety hiatrika ny olana momba ny fihenan'ny lozabe ianao. Mety tsy ho afaka mihazona ny fipetrahana raikitra ireo mpivarotra ary mety ho hafa noho ny vidinao ny vidinao.
2. Fielezana miovaova
Amin'ity karazana ity, ny fanaparitahana dia avy amin'ny tsena ary ny saram-barotra amin'ny mpiasan'ny orinasa azy. Amin'ity tranga ity dia tsy misy atahorana ny mpivarotra noho ny fanakorontanana maloto. Matetika ny mpivarotra dia mankafy ny fiparitahana an-tsokosoko afa-tsy amin'ny hetsika tsena.
Mpanera birao tsy miankina tolotra miovaova ny tolotra. Ny broker toy izany dia mahazo ny vidin'ny mpivady vola avy amin'ny mpamatsy vola marobe sy ny brosy theses dia mampita ny vidiny mivantana amin'ireo mpivarotra nefa tsy misy idiran'ny birao fifanakalozana. Midika izany fa tsy voafehin'izy ireo ny fanaparitahana ary hitombo na hihena ny fiparitahana arakaraka ny tsy fetezan'ny tsena sy ny famatsiana ary ny fangatahana vola.
Ny fampitahana miitatra miorina sy miovaova
Ny sasany amin'ireo tombony sy fatiantoka momba ny fiparitahana miovaova sy miovaova dia resahina etsy ambany:
Ny tombony sy ny tsy fahombiazan'ny karazana fanaparitahana roa ireto dia voasoritra eto ambany:
Mety misy ny mitaky
Tsy misy ny loza mitaky
Ny vidin'ny fifindrana dia azo vinavinaina
Ny vidin'ny fifindrana dia tsy azo vinavinaina velively
Kely ny fitakiana vola
Ny takian'ny renivohitra dia somary lehibe kokoa.
Mety amin'ny fanombohana
Mety amin'ny mpivarotra mandroso
Ny tsenan-tsoavaly dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiparitahana
Mety hihamalalaka ny fiparitaka amin'ny fotoana feno faharetana
Ahoana ny fomba refesina ny fiparitahana amin'ny varotra Forex?
Ny fiparitahana dia raisina ao anatin'ny fitanana ny vidin'ny vidin'ny fangatahana sy ny vidin'ny andiany farany. Ny isa marobe farany dia 9 sy 4 amin'ny sary eto ambany:
Ianao dia mila mandoa ny fiparitahana miparitaka na manao varotra amin'ny alàlan'ny CFD na manaparitaka ny kaonty petra-bola. Toy izany koa ny fanolorana mpivarotra mandoa vola rehefa mizara CFD. Ireo mpivarotra dia aloa amin'ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny varotra. Ny fanapariahana mafampana dia tena manasoa ny mpivarotra.
Ohatra: Ny vidin'ny tolotra ho an'ny mpivady GBP / JPY dia 138.792 raha ny vidin'ny fangatahana dia 138.847. Raha manala ny 138.847 amin'ny 138.792 ianao dia mahazo 0.055.
Satria ny faran'ny vidin'ny marika farany no fototry ny fiparitahana; noho izany, ny fiparitahana dia mitovy amin'ny 5.5 pips.
Inona no ifandraisan'ny sisiny amin'ny fiparitahana?
Mety hanana risika handray ianao sisiny miantso raha toa ka manitatra be ny forex ary ny tranga ratsy indrindra dia ny fikajiana azy ho azy. Na izany aza, misy ny antso an-tsisiny raha tsy milatsaka ambanin'ny takiana 100% ny sandan'ny kaonty. Raha mahatratra ambanin'ny takiana 50% ny kaonty dia esorina ho azy ny toeranao rehetra.
Ny fanaparitahana Forex dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fangatahana sy ny vidin'ny tolo-bidin'ny a Forex mpivady. Matetika dia refesina amin'ny pips izy io. Zava-dehibe ho an'ny mpivarotra ny mahafantatra izay anton-javatra misy akony amin'ny fiovaovan'ny fielezana. Ny vola lehibe dia manana habetsahan'ny varotra; ambany noho izany ny fiparitahan'izy ireo raha toa kosa ny tsiroaroa hafahafa dia miparitaka be ao anatin'ny fatiantoka ambany.